चुनावले प्रमाणित गर्‍यो, प्रचण्ड नै सबैभन्दा चलाख र हिम्म्तवाला नेता हुन- रबी लामिछाने – Annapurna Post News
May 24, 2022 sujaLeaveaComment on चुनावले प्रमाणित गर्‍यो, प्रचण्ड नै सबैभन्दा चलाख र हिम्म्तवाला नेता हुन- रबी लामिछाने
यहाँ जे जति उपलब्धीहरु प्राप्त भएका छन ति सबै दश वर्षे जनयुद्द बाट मात्रै सम्भव भएकाे उनकाे बुझाइ रहेकाे छ ।नेपालीहरुले क,ठाेर राना शाषण, पञ्चायत, जहाँनिया राजतन्त्र लगायत थुप्रै क,ठाेर भन्दा कठाेर शाषण व्यवस्था भाेगेका छन ।हामी धेरै कुराहरु अध्ययन नगरेर हचुवाकाे भरमा वाेल्ने गर्छाै, लेख्ने गर्छाै ।हामी नराम्राे कामकाे यति विराेध गर्छाै कि जुन स्वयम आफैले आफ्नै शब्दहरु सबैकाे अगाडी पढ्न सक्दैनाैँ ।
अब देशमा विकास निकास चाहिएकाे हाे तर विकास भएन भनेर अन्य उपिब्धीहरु केहि हाेइनन भन्नु हुन्न ।यसरी साेच्न थाल्याे भने हामी सहि दिशामा अगाडी बढ्न सक्दैनाैँ ।स्वतन्त्र रुपमा कुनै पनि काम गर्न पाउनु सबैभन्दा ठुलाे कुरा हाे जुन राजतन्त्र र राणा कालहरुमा थिएन ।केही लेखेकै कारण, केही वाेलेकै कारण राज्य बाट वर्व,रतापुर्वक दमन हुनथ्याे, कति जना राज्य वि,रुद्द थाेरै वाेल्दा पनि सहिद भए ।
हाे यि र यस्तै कारणले याे व्ववस्था सही छ । याे व्ववस्था भित्र अब विकास निकास चाहिएकाे छ ।अन्य थुप्रै विकृ,तीहरु छन र सबै नराम्रा कुराहरु हटाउनु छ त्याे अलग पाटाे हाे ।
याे भन्दा उत्तम व्यवस्था प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्था हाे जुन माओवादी वा प्रचण्ड नारा थियाे तर सफल भएकाे छैन । सबैअहिले जाे सरकारमा छन वा जसले हरेक ठाउँमा ठुला ठुला कुरा गरिरहेका छन उनिहरु राजतन्त्र भएकाे भए राजाकाे जयजयकार गर्दै खुट्टा ढाेग्नु पर्ने थियाे ।
साँच्चे प्रचण्डले एकपटक आँट नगरेकाे भए सत्तामा रमाइरहेका नेता देखि चर्चित व्यक्तिहरु पनि राजाकाे चा,करी विना एक कदम पनि अघि बढ्न सक्न्रे अवस्था हुने थिएन ।
राजाकाे व्यवहार मन परे पनि नपरे पनि जुनसुकै काम गर्दा पनि राजाका पाउँ पर्नु पर्ने थियाे । याे हेर्दा सामान्य लागे पनि धेरै ठुलाे कुरा हाे ।संसारमा जतिसुकै विकास भए पनि सबैभन्दा ठुलाे कुरा अधिकार हाे भन्ने कुरा त हामिले विकसित देशमा भएका विभिन्न घटनाहरु बाट बुझेकै कुरा हाे ।
अहिले गाउँ गाउँमा सरकारी सविधा पुगेकाे छ । हरेक किसिमले पिछडिएका वर्गले राज्यकाे सेवा सविधा लिने कानुन वनेकाे छ । सरकारी तथा गैर सरकारी सबै निकायहरुमा पिछडिएकाे वर्ग, समुदाय, महिला सबैकाे सुनिश्चितता गरिएकाे छ ।
संघियता, समानुपातिक समावेशी सहितकाे संविधान छ । देश त हेर्दा हेर्दै संघिय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकाे छ ।के याे जाेक हाे त ? के याे सामान्य दुःखले सम्भव भएकाे हाे त ? के तपाइ हामीले जस्तै चुप लागेर वसेकाे भए यी कुरा सम्भव थिए त ? के यी सबै कुरा प्राप्त गर्नकाे लागि कसैले आँट नगरेकाे भए सम्भव थिए त ?
सरल भाषमा भन्नुपर्दा याे सामान्य कुरा हुँदै हाेइन, याे त ठुलाे उपलब्धी हाे जाे सामान्य मेहनतले सम्भव हुँदैन ।यी कुरा यति ठुला कुरा हुन कि जुन प्राप्त गर्नकाे लागि हजाराैँकाे रगत वगेकाे छ, हजाराैँ अं,गभंग भएका छन र कराेडाैँ नेपालीले ज्यानकाे प्रवाह नगरेर ल,डेका छन ।बेकारमा केही मानिसहरुले माओववदीले ल्याएकाे व्यवस्थामा टेकेर माओवादीकै कुरा का,टिरहेका छन ।
मानिसहरु साेच्न सकेका छैनन क,ठाेर कानुन कस्ताे हुन्छ, राज्यकाे निर्म,म शाे,षण कस्ताे हुन्छ भनेर ? राज्य वि,रुद्द वाेल्न वित्तिकै ज्यान गुमाएका सहि,दहरुकाे भने सम्मान गर्छन तर जुन मानिसले यति स्वतन्त्रता ल्यायाे उसकाे भने अपमान गरिरहेका छन ।
सायद धेरै स्वतन्त्रता भएर हाेला मानिसहरुले मानिस नै चिन्न छाेडेका छन, जसले राम्राे काम गरेका छन उनिहरुकाे अपमान गरेर उनिहरुले नै ल्याइदिएकाे व्यवस्थामा रमाइरहेका छन । बडाे अचम्म लाग्छ, कति वेला त लाग्छ असल मानिसकाे पहिचान गराउन फेरि उहि पुरानै शाषण आए हुन्थ्याे तर याे पनि उत्तम विकल्प हाेइन ।
हाम्रै पुस्ताका मानिसहरु राज्य वा समाजका शा,षक ठुलाबडाका वि,रुद्द चुइक्क वाेल्दा पनि जेल नेल भाेग्नुपर्ने यात मृ,त्य,द,ण्ड भाेग्नुपर्ने निर्म,म सत्ताकाे शि,कार हुन पर्ने स्थिति आयाे भने मात्र मात्र थाहा हुनेछ स्वतन्त्रता के हाे भनेर ? अहिले त यहाँ गिलासमा मिठाे दुध खाएर दुध दिने गाइकाे अपमान गरे जस्तै भइरहेकाे छ ।
रबी लामिछानेले भनेका छन, जसले यति धेरै अधिकारहरु हामिलाइ दिएकाे छ, आज उसकै विराेध भइरहेकाे छ । साेचे जस्ताे सबै कुरा प्राप्त नभएकाे हाेला, यी कुराहरु प्राप्त गर्न मानिसहरुकाे वलि,दान भएकाे हाेला त्याे स्वभाविक हाे परिवर्तन सिटी बजाएर आउने कुरा हाेइन, परिवर्तनले त्याग, तपस्या र वलि,दान माग्छ नै ।
प्रचण्डकाे नेतृत्वमा माओवादीले गरेकाे दश वर्षे जनयुद्द साँच्चै देशका लागि महान काम थियाे । यदि जनयुद्द हुन्नथ्याे भने हामी दाष भएर वस्नु पर्ने थियाे । नेपाली कांग्रेष, नेकपा एमालेका नेताहरुलाइ त बन्धक बनाएकाे राजतन्त्रले तपाइ हामिलाइ के यतिकै सुख संग बस्न पक्कै पनि दिदैनथ्याे ।ले सफल बनाउन साथ दिनु पर्दछ ।
केशव स्थापितले दिए बालेनलाई जितको शुभकामना: म भन्दा योग्य बालेन हनुहुन्छ जित्नु राम्रो हो (हेर्नुहोस भिडियो)
June 23, 2022 June 23, 2022 suja